के तपाइलाइ शीघ्र स्खलनको समस्या छ ? यस्ताछन शीघ्र स्खलन रोक्ने सजिलो उपायहरु |
के तपाइलाइ शीघ्र स्खलनको समस्या छ ? यस्ताछन शीघ्र स्खलन रोक्ने सजिलो उपायहरु
प्राय: सबैजसो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा वीर्य स्खलन चाँडो भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । घर्षण नै गर्न नपाई वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो । अहिले आफू तथा आफ्नो यौनजोडीले चाहेको समयभन्दा निरन्तर रूपमा चाँडो वीर्यस्खलन भए त्यसलाई शीघ्रस्खलन मान्न थालिएको छ । यस्तो स्थितिमा यौनसम्पर्कबाट प्राप्त हुने सुख नपाइने कुरा सत्य नै हो ।
यसको पक्का कारण यही नै हो भन्न सकिने अवस्था नभए पनि शीघ्र स्खलनको मूल कारण मानसिक नै भएको मानिन्छ । कतिपय मानिसमा यौनसम्पर्क वा क्रियाकलापमा ‘राम्रो’ गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कारण हुन सक्छ । आफ्नो यौनजोडीलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ता (performance anxiety) ले समस्यालाई अझ बढाउँछ । आक्कलझुक्कल शीघ्र स्लखित हुनु अस्वाभाविक होइन, त्यसैले यस्तो स्थितिमा खासै अनावश्यक चिन्ता गर्नु पर्दैन । धेरै चिन्ता गर्दा समस्या थप बढ्न सक्छ । शीघ्र स्खलनको समस्या नियमित रूपमा हुन थाल्यो भने पक्कै पनिसमाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्या कम गर्न आफैंले अवलम्बन गर्न सकिने केही उपाय छन् ।
१.स्खलन होलाजस्तो भएपछि तुरुन्तै लिंग योनिबाट बाहिर झिकेर केही बेर यौन क्रीडा रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुन: सुरु गर्ने ।
२.पुरुष माथितिर र महिला तलको सट्टा महिला माथितिर बसेर सक्रिय भै यौनसम्पर्क गर्दा पनि शीघ्र स्खलन कम गर्न मद्दत मिल्छ ।
३.कन्डमको प्रयोगबाट पनि कतिपयलाई शीघ्र स्खलनको समस्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा चिप्लो पदार्थ कम भएको तथा बाक्लो किसिमको कन्डमले फाइदा पुर्‍याउँछ ।
४. पिसाब आउँदा रोक्न प्रयोग हुने मांसपेशीको कसरत गरेर वीर्य स्खलनलाई रोक्ने अभ्यास गर्न सके फाइदा मिल्छ ।
५.अचेल छालाको संवेदनशीलता कम गर्ने मल्हम तथा स्प्रेहरू पनि बजारमा उपलब्ध छन्, जसले शीघ्र स्खलनलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन् । अभ्यस्त हुन निकै लामो समय लाग्ने भए पनि वीर्य स्खलन नियन्त्रणको अभ्यास पनि अर्को राम्रो उपाय हो ।